MB 2016 Oktoobar, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Waxaan joogay Yom Kippur sannado badan (Jarmal: maalinta kafaaraggudka), waa iiddii Yuhuudda ee ugu saraysay, waa la soomay. Waxaan ku sameeyay aaminaadda beenta ah ee ah in layla heshiiyo ilaahay adoo si adag u sheegay cunada iyo cabitaanada maalintaas. Qaar badan oo naga mid ah dhab ahaantii wali waan xasuustaa qaabkan qaldan ee fikirka. Si kastaba ha noqotee, tan ayaa naloo sharxay, ujeeddada soonka Yom Kippur waxay ahayd dib-u-heshiisiinteena (Ver-Sohn-ung [= korsashada sida carruurta, xuska Üs]) Ilaah agtiisa ayaa la maraa shaqadiisa. Waxaan ku dhaqmey nidaam diimeed nimco iyo shaqooyin - anaga oo iska indho tiray xaqiiqda uu Ciise yahay dib u heshiisiinteena. Laga yaabee inaad xasuusato xarafkeygii iigu dambeysay. Waxay ku saabsanayd Rosh Hashana, Maalinta Sannadka Cusub ee Yuhuudda, oo sidoo kale loo yaqaanno maalinta loo yaqaan 'trombone day'. Waxaan ku soo gabagabeeyey aniga oo tilmaamaya in Ciise buuna buunbuun u fuulay Malaakii oo dhan wuxuu ahaa Sayidkii sanadka - xitaa Sayidkii mar walba. Sidii loo dhammaystiray axdigii Ilaah la galay reer binu Israa'iil (axdigii hore) Ciise, Abuuraha wakhtigiisii, mar kasta wuu is beddelaa weligiis. Tani waxay ina siinaysaa aragtida axdiga cusub ee Rosh Hashana. Haddii aan sidoo kale indhihiisa ku eegno Yom Kippur axdiga cusub, waxaan fahamsanahay inuu Ciise yahay dib-u-heshiisiinteenna. Sida la mid ah maalmaha ciidda reer binu Israa'iil oo dhan, maalinta kafaaragguddu waxay tilmaamaysaa qofka iyo shaqada Ciise xagga badbaadadeenna iyo dib-u-heshiisiinta. Wuxuu ku dhejiyaa nidaamkii hore ee nidaaminta sharciga ee reer binu Israa'iil qaab cusub Axdiga Cusub.
Hadda waxaan fahamsanahay in ciidaha kalandarka Cibraaniga ay tilmaameen imaatinka Ciise sidaas darteedna ay waqtigooda dhaafeen. Ciise mar hore ayuu yimid oo wuxuu dajiyay axdiga cusub. Marka waxaan ognahay in Ilaah u adeegsaday jadwalka sidii aalad si uu nooga caawiyo inaan aragno Ciise runtii yahay. Maanta, waxaan diirada saareynaa afarta dhacdo ee ugu muhiimsan nolosha Masiixa - dhalashadii Ciise, dhimashadiisii, sarakiciddiisa, iyo u dabbaaldegaan. Yom Kippur wuxuu tilmaamay in lala heshiisiinayo Ilaah. Haddii aan rabno inaan fahamno waxa Axdiga Cusubi ina baray dhimashadii Ciise, markaa waa inaan maanka ku haynaa moodhalka Axdiga Hore ee fahamka iyo cibaadada ku jira axdigii Ilaah la galay Israa'iil. (axdigii hore) ayaa lagu soo daray. Ciise wuxuu yidhi dhammaantood waxay isaga ka marag furayaan isaga (Yooxanaa 5,39-40).
Si kale haddii loo dhigo, ciise waa muraayadda aan sida saxda ah ugu fasiri karno Kitaabka Quduuska ah oo dhan. Axdiga Hore (kaas oo ay kujirto Axdigii Hore) hadda waxaan ku fahmaynay muraayadda Axdiga Cusub (axdiga cusub, kaas oo Ciise Masiix uu si buuxda u oofiyey). Haddii aan u sii wadno kala-guurka, waxaan u gaarnaa gabagabada, oo ku saleysan go'aanno qaldan, in Axdiga Cusub uu ku bilaaban doono oo keliya soo laabashada Ciise. Malo awaalkani waa khalad aasaasi ah. Qaarkood waxay si qalad ah u aaminsan yihiin inaan ku jirno xilli kala guur ah oo u dhexeeya axdiyadi hore iyo kan cusub sidaa darteedna ay waajib nagu tahay inaan ilaalinno maalmaha ciidaha Cibraaniga.
Intii lagu guda jiray wasaaradiisa dhulka, Ciise wuxuu sharaxay dabeecadda deganaanshaha sharciga cibaadada ee reer binu Israa'iil. In kasta oo Ilaah amar ku bixiyay in cibaado gaar ah la caabudo, Ciise wuxuu tilmaamay inay taasi bedeli doonto. Wuxuu taas ku nuuxnuuxsaday markay la hadlaysay haweenaydii isha Samaariya ka timid (Yooxanaa 4,1-25). Waxaan soo xiganayaa Ciise, oo u sharraxday in cibaadada ay dadka Eebbe ku yeelan doonaan bartamaha Jermalka ama meel kale. Meel kale, wuxuu ballan qaaday in meel kasta oo laba ama saddex ay ku soo wada ururaan, uu iyaga ka mid noqon doono (Matayos 18,20). Ciise wuxuu naagtii reer Samaariya ah u sheegay in markii uu dhammeeyo shaqadiisa dhulka inaysan jiri doonin wax sida meel quduuska ah oo kale.
Fadlan la soco waxa uu ku yidhi iyada:
Waxaa la gaadhay wakhtigii aydnaan Aabbaha ku caabudi doonin buurtan ama Yeruusaalem.
Waxaa la joogaa xilligii la caabudi lahaa caabudayaasha runta ihi ay Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta; maxaa yeelay aabuhu sidoo kale wuxuu doonayaa cibaadada noocaas ah. Ilaah waa Ruux, kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta (Yooxanaa 4,21-24).
Ogeysiiskan, Ciise wuxuu tirtiray macnaha xafladaha cibaadada reer binu Israa'iil - nidaam ku jira sharciga Muuse (axdigii hore) waa la qoray. Ciise sidan ayuu u sameeyay sababta oo ah shaqsiyan wuxuu ku dhammayn lahaa dhammaanba nidaamkan - macbudka ku yaal Yeruusaalem oo ah xarunta - siyaabo kala duwan. Bayaanka Ciise ee naagtii reer Samaariya ah wuxuu muujinayaa in fara badan oo cibaado caabudid sida ku xusan qaabkii hore ee suugaaneed aan loo baahneyn hadda. Iyada oo cibaadaysanayaashii cibaadada ee Ciise ee ahayd inaysan mar dambe u safrin Yeruusaalem, uma sii hoggaansami karaan qawaaniinta ku xusan sharciga Muuse, kaas oo nidaamkii hore ee cibaadada ay ku tiirsanayd jiritaanka iyo adeegsiga macbudka.
Hadda waxaan ka tagnay luqadda Axdiga Hore oo si buuxda Ciise ayaanu ugu noqonaynaa; waxaan u beddelnaa hooska una soo baxa iftiin. Annaga tan tan micnaheedu waa inaan u oggolaano Ciise inuu shakhsi ahaan go'aamiyo fahamkeenna dib-u-heshiisiinta ee hawshiisa ah dhexdhexaadiyaha keliya ee u dhexeeya Ilaah iyo aadanaha. Isaga oo ah Wiilka Ilaah, Ciise wuxuu ku yimid xaalad duruufaheeda hore loogu diyaariyey reer binu Israa'iil hortiis oo wuxuu ku dhaqaaqay si sharci iyo hal abuur leh si uu u oofiyo axdigii hore oo dhan, oo ay ku jiraan dhammaystirka maalinta kafaaraggudka.
Buuggiisa Inarnation, (Ahaanshaha), Qofka iyo Nolosha Masiixu waxay u sharraxday TF Torrance siduu Ciise u dhammaystiray dib-u-heshiisiinteenna Ilaah: Ciisena ma diidin wacdinta Yooxanaa Baabtiisaha ee ku saabsan ku dhawaaqista xukunka: nolosha Ciise qof ahaan iyo gaar ahaan dhimashadii Ciise , Eebbe uma xukumayo xumaanta isagoo si dhib yar oo xoog leh masiibo ugu masaxaya gacanta, laakiin isaga oo si buuxda isugu dhex galiya xididka shar weyn si uu u qaato xanuunka oo dhan, dembiga iyo dhibaatada. Maaddaama Ilaah laftiisu soo faragaliyay inuu qaado dhammaan xumaanta aadanaha, qabashadiisa qabowgu wuxuu leeyahay awood weyn oo wax qarxinaysa. Taasi waa awoodda dhabta ah ee Eebbe. Sidaa daraadeed iskutallaabtu waa (Iskutallaabta dusheeda) oo leh tawxiidkiisii ​​oo dhan, dulqaad iyo naxariis badan maahan ficil adkeysi iyo muuqaal yaab leh, laakiin ficillada ugu awoodda badan uguna halista badan, sida jannada iyo dhulku waligood ma aysan la kulmin ka hor: weerarka jacaylka Eebbe Quduuska ah ka dhanka ah bini'aadamka iyo dulmiga shar, iyo caarada xumaanta oo dhan (Bogga 150).
Haddii mid uun u tixgeliyo dib-u-heshiisiinta sidii heshiis sharci ah oo ku saabsan dareenka is-fahamka mar labaad lala yeesho Ilaah, tani waxay keenaysaa aragti dhammaystiran, taas oo nasiib-darro Masiixiyiin badani maanta haystaan. Aragtida noocan oo kale ah kama liidato waxa Ciise uu ku sameeyey annaga noo wanaagsan. Dembiilayaal ahaan, waxaan u baahan nahay kaliya xorriyadda ciqaabta dembiyadayada. Waxaan u baahanahay in dembiga laftiisa la siiyo dharbaaxadii ugu dambeysay si looga tirtiro dabiicadeena.
Taasi waa sax Ciise waxa uu sameeyay. Halkii laga daaweyn lahaa astaamaha, ayuu u rogay sababta. Sababtaas ayaa si ku habboon loogu magacaabi karaa 'Soo Bilowgii Aadam (Jarmal: Adam Musuq-maasuq iyo Bilow Cusub), kadib buug uu qoray Baxter Kruger. Cinwaankan wuxuu sheegayaa wixii Ciise ugu dambeyntii ku guuleystey isagoo dadka la heshiisiinaya Ilaah. Haa, Ciise wuxuu bixiyay ciqaabta dembiyadeenna. Laakiin waxbadan ayuu qabtay - wuxuu sameeyay qalliin cosmic ah. Wuxuu u adeegsaday wadno gooye aadanaha dhacay, aadanaha dembiga badan! Qalbigan cusubi waa wadnaha dib-u-heshiisiinta. Waa qalbiga Ciise - kan ah, sida Ilaah iyo ninka, oo ah dhexdhexaadiye iyo wadaadka sare, oo ah Badbaadiyahayaga iyo walaalkeen ka weyn. Ruuxa Quduuska ah, siduu Ilaahay ugu ballan qaaday nebiyadii Yexesqeel iyo Yoo'eel, Ciise wuxuu ku keenayaa nolol cusub addimadayada qallalan oo na siisa qalbiyo cusub. Dhexdeeda waxaan ku abuurnaa abuur cusub!
Kugula xiriiray abuurka cusub,